Tawaaf IsaCosmic Law,မဟာစကြာဝဠာရဲ့ဥပဒေသ – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on November 21, 2009 December 21, 2009 by kyawkyawoo	Posted in Haj and TawaafTagged al Quran, allah, မဟာစကြာဝဠာရဲ့ဥပဒေသ, ဟာဂျီလောင်း, ဟာ့ဂျ, နေစကြာဝဠာ,ဲ့ဂယ်လက်ဆီ, burmese muslim, burmese muslim minority, Haj and Tawaaf, islam, Kaaba, kaaban haj, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, Navedz, religion, Tawaaf IsaCosmic Law
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့Post တခုကိုမိတ်ဆွေ Navedz ရဲ့blog မှာဖတ်မိတယ်။ ဒါနဲ့
ဒီလင့် က post လေးကိုပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းကြည့်မိတယ်။
Allah Almighty says: “It is He Who created the Night and the Day,
and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along,
each in its rounded course.” (Surah Al Anbiya 21:33)
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်မှာ နေလနဲ့ကြယ်အပါအဝင် စကြာဝဠာတွင်ရှိရှိသမျှ တို့သည်မိမိတို့
ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ကမ္ဘာဂြိုယ်ဟာနေမိသားစုထဲမှာပါ ဝင်ပါတယ်။ နေမိသားစုဝင်ဂြိုယ်တွေ
အားလုံးဟာ မိမိရဲ့ပတ်လမ်းအသီးသီးနဲ့ နေကိုဗဟိုပြုပြီးလှည့်ပတ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာအရံဂြိုယ်ဖြစ်တဲ့ လ ကကမ္ဘာကိုတလကိုတပတ် လှည့်ပတ်ပါတယ်။ နေမိသားစုဝင် ဂြိုယ်များအားလုံးမှာ လလိုအရန်ဂြိုယ် အားလုံး ၆၀ ကျော်ရှိတယ်လို့
နေမိသားစုရှိတဲ့ဂယ်လက်ဆီ ကို Milky Way Galaxy လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ ဂယ်လက်ဆီ မှာကြယ်ပေါင်း သန်းပေါင်း၁၃၀ ဘီလျှံ ရှိပြီးဒီကြယ်တွေအားလုံးဟာဂယ်လက်ဆီ ရဲ့
ဗဟိုကိုမိမိတို့ရဲ့ပတ်လမ်းအသီးသီးနဲ့ပတ်နေပါတယ်။တကယ်တော့နေဟာ Milky Way Galaxy မှာရှိတဲ့ကြယ်တွေထဲကအလတ်စားကြယ်တခုသာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကမ္ဘာကို လ က တလတခါတပတ်ပြည့်အောင်ပတ်ပါတယ်။ နေစကြာဝဠာမှာရှိတဲ့ ဂြိုယ်တွေအားလုံးကနေကိုသူ့ပတ်လမ်းအသီးသီးနဲ့ပတ်နေပါတယ်။
နေစကြာဝဠာနဲ့တကွ milky way ဂယ်လက်ဆီမှာရှိတဲ့ကြယ်များအားလုံးဟာ
ဂယ်လက်ဆီ ရဲ့ဗဟိုကိုပတ်ပြီး ပတ်လမ်းအသီးသီးနဲ့လှည့်နေကြပါတယ်။
ဒီလိုလှည့်ပတ်နေတာဟာဖန်ဆင်းရှင်Allah ရဲ့ဝဟီအမိန့်ကိုနာခံတဲ့သဘာဝတခုပါ။ ဒီဥပဒေသကို လူတွေရဲ့မျက်စေ့နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အက်တမ်လို့သိကြတဲ့အနုမြူမှုံလေးတွေမှာလဲလိုက်နာနေတာအောက်ကပုံအတိုင်း
လူ့ရဲ့ဆဲ ကလပ်စီး တခုမှာအလယ်ဗဟိုမှာ ရှိတဲ့နူကလိယကို ပတ်လည် ဝိုင်းထားတဲ့ Cytoplasm ကိုအောက်ပါအတိုင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ကဖော်ပြ ထားတဲ့ မဟာစကြာဝဠာ မှ အစအက်တမ် အနုမြူမှုံ လေးမျာ
(၁) သတ်မှတ်သောဗဟိုချက်ကို လှည့်ပတ်ခြင်း
ဖြစ်တဲ့ အရွယ်အစားအလွန်ကြီးမားတဲ့စကြာဝဠာများမှ အလွန်သေးငယ်
တဲ့ အက်တမ် အနုမြူမှုံ လေးများအထိ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဝဟီအမိန့်တော်ဖြစ်
သောအရာကိုဗဟိုပြူပြီးလှည့်ပတ်ရသည် ” ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ သစ္စာတရားကို သိမြင်ရပါတယ်။
“Behold! We gave the site, to Ibrahim, of the (Sacred) House, (saying): “Associate not anything (in worship) with Me; and sanctify My House for those who compass it round, or stand up, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer).” And proclaim the Pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways;” (Surah Al Hajj 22:26-27)
ဟာဂျီလောင်းများသည် Allah ရဲ့ဝဟီအမိန့်တော်ကိုနာခံပြီး
ကမ္ဘာဦးဝတ်ကြောင်းတော်ကို ဟာ့ဂျပြုရန်လာတဲ့အခါ သာဝတ်ဖ
ပြုရပါတယ်။ ကာ့အဘာကျောင်းတော်ကိုသန်းနဲ့ချီတဲ့ Islam ဘာသာဝင်များ
Adapted/ Original post
Tawaaf IsaCosmic Law
2 thoughts on “Tawaaf IsaCosmic Law,မဟာစကြာဝဠာရဲ့ဥပဒေသ”
I visit kyawkyawoo`s web regularly.Alhamdulilah I gotalot of knowledge from his articles.Quran2:269 mentions important of knowledge.(He gives wisdom to whom He wills and whoever has been given wisdom has certainly been given much good.And none will remember except those of understanding.)
EID MUBARAK. This is nice post. May Allah bless you on your hardwork.
I have open my cbox on islam-yaungche blog.
Now u can drop comment on it 🙂